ဗိုလ်ချုပ်မြ (သို့မဟုတ်) စစ်သားစိတ် နှင့် နိုင်ငံရေး လုပ်သူ အပိုင်း(၁) | အဲခါန်.သင့်(အဲခေါင်သောင့်)
Posted by အဲခေါင်သောင့် at 9:41 PM
စီးပွားရေးက မြေယာ စီးပွားရေးသာ ရှိ၏။ တောင်ယာ ခုတ် ၍ စပါးစိုက်မည်၊ နှမ်းစိုက်မည်။ ကုန်သွယ်ကူး သန်းရောင်း ဝယ်မှု မရှိ…..။ငါးပိ၊ ဆေး၊ ဆား ဝယ်လို လျှင် …. မူသယ်-ဗျက်ကော မှ တဆင့် ကျောက်ကြီးမြို့ သို့ဆင်းပြီး တနှစ်စာဝယ် ထားကြရ ၏။ စာသင်ကျောင်း မရှိ၊ ဆေးပေးခန်း မရှိ။ ကိုးကွယ်မှုကား ရိုးရာ နတ်ကိုး ကွယ်မှုသာ ကိုးကွယ်ကြ ၏။
ထိုရွာလေး တွင် … သူ့ကို ၁၉၂၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂ဝရက်နေ့က မွေးဖွားခဲ့ သည်။ ဖခင်က`စောဂယ်`၊ မိခင်က မူ နော်ဒါးဆဲ`` ဖြစ်သည်။ သူ့တွင် သူ အပါအ ဝင် မွေးချင်း ညီနောင် ၁၂ ယောက် ရှိသည်။ သူကား ဆယ်ဦးမြောက်သားဖြစ်သည်။ သူ့ အထက် တွင် အမ ၇ ယောက်ရှိ သည်။ သူ့အောက် တွင်ကား ညီ တယောက် နှင့်ညီမငယ်တ ယောက် ရှိ၏။
ထိုဒေသရှိ အိမ်များကို အမိုးမိုး ရာတွင် ဖက်မသုံး။ `ကျသောင်းဝါး` များကို ခြမ်း၍ မှောက်ခုံ၊ပက်လက် ယှက် ၍ ထပ် ပြီး မိုးကြ၏။ လေကွယ် ရအောင် တံခါး များ ဖောက်၍ အခန်းဖွဲ့ကြ ၏။ ရာသီက အေး၏။ အိမ် အလယ်တွင် မီးဖိုကြီးအား ဖိုထား ကြရ၏။ ညအိပ်လျှင် မီးဖိုဘေးကပ်၍ အိပ်ကြရ သည်။ ထိုတောင်ပေါ် ရွာလေးတွင် ပင် သူ၏ ခလေးဘဝ ဖြတ် သန်း ကြီးပြင်း ခဲ့ရ၏။
ထီးမူခီး တွင်က အတန်း ကျောင်း မရှိ၊ ပညာသင် ချင်လျှင် ဖာပွန်သို့ တက်၍ သင်ကြရသည်။သူလည်း မူလတန်း ပညာကို ဖာပွန်သို့ တက်၍ သင်ကြား ခဲ့ရ၏။ သူကျောင်း စနေသည့် နှစ်က ၁၉၃၆ ခုနှစ် ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် တွင် ကိုနု၊ ကိုအောင်ဆန်း တို့ ဦးဆောင်ပြီး ကိုလိုနီ ပညာရေး သပိတ်မှောက်ကြ သည့် နှစ်ဖြစ်သည်။ ကိုလိုနီပညာ ရေး ကိုပင် သူသည်ဆုံးခန်း တိုင်အောင် မသင်ကြားခဲ့ရ….။ ဒုတိယ ကမ္ဘာ စစ်ကြီးက ကျောင်း သင်္ခန်း၏ တံခါးများကိုပိတ် စေခဲ့ ၏။
၁၉၄၂ တွင်ပင် သူသည် ကျောင်း ပညာရေး နှင့် ဝေးခဲ့ရ၏။ ထိုစဉ်ကသူ့အသက်သည် ၁၅ နှစ်ခန့် ရှိခဲ့လေပြီ။ ကျောင်း ထွက် ပြီးနောက် သူသည် ထီးမူခီးသို့ မပြန်ဖြစ်။ ဖာပွန်တွင် ပင် ရှိနေ၏။ နေမျိုးနွယ် တပ်ကြီးက နယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော် ကာ မြန်မာပြည် ကို သိမ်း၏။ ဖာပွန်တွင် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သစ် ဖွဲ့၏။ ဘီအိုင်အေ အုပ်ချုပ်ရေး….။ ဖာပွန်မြို့ကာ ကွယ် ရေး အတွက်လက်နက်ကိုင် ပုလိပ် တပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့သည်။ ထိုပုလိပ် တပ်ဖွဲ့သို့ သူ ဝင်လိုက်သည်။ပုလိပ်တပ် သား အဖြစ် ``ဖွဂေါ်``တွင် တာဝန်ကျ၏။
ဗြိတိသျှ တပ်သား အချို့က အိန္ဒိယသို့ဆုတ်ခွာရာ တွင် ပါမသွားဘဲ ဖာပွန်တောင် တန်းများ အတွင်း ခိုအောင်း ၍ ကျန်နေ ခဲ့ကြ သည်။ ထိုသူတို့ နှင့် သူသည် အဆက် အသွယ်ရှိ၏။ မကြာခဏ တွေ့၏။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေး အတွက် ပြင်ဆင်ကြ၏။မကြာ ….. ဗြိတိသျှ စစ်တပ်မှ ဗိုလ်မှူးကြီး နီးမိုးနှင့် ဗိုလ်အဲရယ် တို့ နှစ်ဦး လေထီးနှင့်ဆင်း လာကြသည်။ သူတို့နှင့် အတူ အချက်ပြ ဆက်သွယ်ရေး စက်လည်း ပါလာသည်။နောက်ပိုင်း တွင်မူ မကြာ …မကြာ အိန္ဒိယ မှ လေထီး တပ် သားတို့ ဖာပွန်ဒေသ၌ ဆင်းကြ၏။
Force – 136 မှ တပ်သားများ ဖြစ်သည်။ ထိုလေ ထီးဆင်း တပ်သားများ တွင် မြန်မာ လူမျိုးများလည်းပါ၏။ ဖတ ပလ နှင့် Force – 136 အစီ အစဉ်နှင့် ဆင်းလာ ကြသော ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေး ရဲဘော် များ ဖြစ်သည်။
၁၉၄၅ ခုနှစ် ။နွေဦး…။
ဖက်ဆစ်တော် လှန်ရေးက ရင့်မှည့်၍ နေလေပြီ။ Force – 136မှ တပ်မှူး`ကာနယ် ဖီးကော့``သည် အင်အား ၃ဝဝ ခန့် နှင့် ဖာပွန် ဒေသတွင် အခြေပြုပြီး ဂျပန်တော် လှန်ရေး အတွက် ပြင်ဆင် လျက်ရှိသည်။ ထိုနွေဦး တွင်ပင် သူနှင့်အ တူ `ဖွဂေါ်``တွင်တာဝန်ကျ သည့် ကရင်လူမျိုး ပုလိပ် တပ်သား အားလုံး သည် Force – 136 သို့ သွားရောက် ၍ပူး ပေါင်း လိုက်ကြသည်။ Force – 136 မှ သူတို့အား စစ်သင် တန်းပေး၏။ ယူနီဖောင်းများ ထုတ်ပေး၏။ လက်နက် များ က အသစ်များ အိန္ဒိယမှ လေယာဉ်နှင့် ချပေးသည့် လက်နက် ခဲယမ်းများ ဖြစ်သည်။ သင်တန်း ဆင်းပြီးနောက် သူ တို့ အား Force – 136 ၏ဦးဆောင်မှု အောက်ရှိ ကရင် ပြောက်ကျား တပ်အဖြစ် လှုပ်ရှားစေ ၏။ သူတို့၏ တပ်ဖွဲ့သည်အင်အား ၅ဝဝ ခန့် ရှိသည်။ ခေပူ၊ သောသီခို၊ မော်ခီး၊ တောင်ငူ၊ ဇရပ်ကြီး နယ်မြေအတွင်း Force – 136 နှင့်အတူ… သူတို့ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို တော်လှန်ခဲ့ရ၏။
ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေး ပြီးသည့် နောက် သူသည် UMP ဟု ခေါ်သည့် ပြည်ထောင်စု စစ်ရဲတပ်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ သည်။ ထိုစဉ်က. မြန်မာ ပြည်ရှိ လက်နက်ကိုင် တပ်များတွင် … ကန္ဒီ ဆွေးနွေး ပွဲအရ ဖွဲ့စည်းခဲ့ သည့် တပ်မတော် တပ်ရင်း များ ရှိ၏။ ပြည်သူ့ ရဲဘော် တပ်ဖွဲ့များ သောင်းကျန်းမှု နှိမ်နှင်ရေး တပ်ဖွဲ့များနှင့် KNDO ၊ MNDO တပ်ဖွဲ့များ ရှိသည်။
ပြီးလျှင် ….. ရှမ်းပုလိပ် တပ်များနှင့် ပြည်ထောင် စု စစ်ရဲ တပ်တို့ ရှိကြ၏။ သခင် အောင်ဆန်းဦးဆောင်သည့် ဖဆပ လ သည် တမျိုး သားလုံး လွတ်မြောက် ရေး အတွက် နည်းလမ်း ပေါင်းစုံနှင့် လုပ် ကိုင်ဆောင် ရွက်လျက် ရှိသည်။ သခင်အောင် ဆန်းသည် လန်ဒန် သို့ သွားပြီး ဗြိတိသျှ နန်းရင်း ဝန် အက် တလီနှ င့်ဆွေးနွေး ၏။ အောင်ဆန်း-အက်တ လီ စာချုပ် ချုပ်ဆို၏။
အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှား မှုများက အရှိန် အဟုန်နှင့် မြင့်တက် နေသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော် ဝါရီလ ၅ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ရှိ `ဗင်တန်` ခန်းမ၌ ကရင် အမျိုးသား ကွန် ကရက် ကျင်းပ၏။ ကရင်အမျိုးသား ကိုယ်စား လှယ် ၇ဝဝ ခန့် တက်ရောက်ကြ ၏။ ထို ကွန်ကရက် ၌ ကရင်ဗဟို အစည်း အရုံး KCO နှင့် ကရင် လူငယ်များ အစည်း အရုံး KYO ပေါင်း၍ ကရင့် အမျိုးသား အစည်း အရုံး KNU ဖွဲ့စည်း ခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် အောက် တိုဘာလ ၃ ရက်နှင့် ၄ရက်နေ့များ တွင် KNU မှ မော်လမြိုင် မြို့၌ ညီလာခံ တရပ် ခေါ်ယူခဲ့၏။
မော်လမြိုင် ညီလာခံမှ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို လက်မခံ ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ ၏။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့ စည်း ပုံအခြေခံ ဥပဒေသည် ကရင် အမျိုးသား များအတွက် ကျေနပ်လုံ လောက်သည့် ကရင်ပြည် နယ်နှင့်ကရင် အစိုးရ ဖွဲ့စည်းရေး မပါရှိဟု ဆိုကြသည်။၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ နိုင်ငံ သည် ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ တံပိုးအောက်ကလွတ်မြောက်ကြောင်း လွတ်လပ်ရေး ကြေညာ ခဲ့၏။
ဖဆပလ ဦးဆောင်သည့် လွတ်လပ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့၏။၁၉၄၈ ခုနှစ် ဖေဖော် ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကရင် အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် စော ဘဦးကြီးနှင့် သရာသာ ထိုက သထုံမြို့နယ် အင်းဝိုင်းရွာ လူထု အစည်း အဝေးတွင် ကရင်ပြည်နယ် သီးခြား ရရှိရေး တရားများ ဟောကြ၏။ KNDO ကလည်း ၃ ရက်နေ့ နေ့ စွဲ နှင့် ကရင်ပြည်နယ် သီးခြား ဖွဲ့စည်း ပေးရန် ထုတ်ပြန်ကြေ ညာချက် ထုတ်၏။ ဆန္ဒပြ တောင်းဆို မှုများက ကရင်အမျိုး သားများ နေထိုင် သည့် နေ ရာ ဒေသတိုင်း၌ ထုတ်ဖော် ပြသ၍ လှုပ်ရှားလာကြ၏။
`ကရင်တကျပ် ဗမာတကျပ် ချက်ချင်းပြ`
`လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်း အလိုမရှိ`
` ပြည်တွင်းစစ် အလိုမရှိ`
၁၉၄၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့….။ အင်းစိန် စစ်မျက်နှာ မှ စ၍ လက်နက်ကိုင် ကရင့် တော်လှန်ရေး သည် တရား ဝင် စတင်ခဲ့၏။ထိုမတိုင် မီကမူ အချို့ဒေ သများ တွင် KNDO နှင့် ကရင် စစ်ရဲ တပ်ဖွဲ့များ၏ လက်နက် ကိုင်တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲခဲ့သည်များ ရှိခဲ့၏။ KNU နှင့် KNDO တခုလုံး အနေနှင့် မဟုတ် …..။စောဘဦးကြီး၊ မန်းဘဇံ၊ သရာသာ ထို စ သည့် ကရင်ခေါင်းဆောင် များက ဖြစ်ပေါ်နေသည့်ကရင့် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး များ ထိန်းသိမ်း နိုင်ရန် ဖဆပ လ နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်နေကြ သေး၏။ မရ….။သမိုင်း က ငြိမ်းချမ်းရေး တေး မရေးဖွဲ့….။ လက်နက်၊ ပြာပုံ၊ ယမ်းငွေ့နှင့် သွေးပင်လယ် ရေးထိုး၏။
တပ်ရင်းမှူး ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းမောင် (နောင် KNU ဗိုလ်ချုပ်မင်းမောင်) ဦးစီးသည့်ကရင့်သေနတ် ကိုင် တပ်ရင်း (၁) သည် တောင်ငူကို သိမ်း၏။ ပြီးလျှင် သံတောင်၊ ဒိုက်ဦး၊ ညောင်လေးပင်၊ ပဲခူးရှိ KNDO တပ်များ နှင့် ပူးပေါင်း၍ အင်း စိန် စစ်မျက်နှာ သို့ ဆင်းလာ၏။ တပ်ရင်းမှူး ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး မြမောင် (နောင် KNU ဗိုလ် ချုပ်မြမောင်) ဦးစီးသည့် ကရင့် သေနတ်ကိုင် တပ်ရင်း (၂) သည်လည်း ပြည်ကို သိမ်းပိုက်ပြီး ရန်ကုန်- ပြည်လမ်း အတိုင်း အင်းစိန် စစ်မျက်နှာ သို့ ချီ လာ၏။ ဦးနု၏ ဖဆပလ အစိုးရ ကား ရန်ကုန် ၇ မိုင်ပတ်လည် တွင်သာ ရုံးစိုက်၍ အာဏာ စစ်ကို ဖြန့်ထား နိုင်တော့၏။
သူသည် ကရင့် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး စတင် သည်နှင့် ပြည်ထောင်စု စစ်ရဲတပ် (UMP) မှထွက်၍ ကရင့်လက် နက် ကိုင် တော်လှန်ရေး သို့ ဝင်ခဲ့၏။ ကရင့်လက်နက် ကိုင်တပ်ဖွဲ့ `သံလွင်`တပ်ရင်းကို ဖွဲ့၏။ သံလွင် တပ်ရင်းတွင် သူသည် တပ်ကြပ်ကြီး အဆင့်နှင့် တာဝန်ထမ်း ဆောင်၏။သံလွင် တပ်ရင်း က ညောင်လေး ပင်၊ ဒိုက်ဦး နယ်များ တွင် တိုက်ပွဲများ ဆင်နွှဲရသည်။ ၁၉၅ဝ ခုနှစ် နွေဦးအထိ ဖြစ်သည်။ ၁၉၅ဝ ခုနှစ် သင်္ကြန်မကျမီတွင် သူတို့၏ သံလွင်တပ် ရင်း ကို ညောင်လေး ပင်မှ ဘီးလင်း၊ ကျိုက်ထို ဘက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ ရန် တာဝန်ပေး၏။ ထိုအချိန်၌ သူသည်သံလွင် တပ်ရင်း တွင် တပ်ခွဲမှူး တယောက် အဖြစ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်နေသည်။